HONOR 8S ဈေးနှုန်း/အချက်အလက်/သုံသပ်ချက်| HONOR မြန်မ
MM ကုန်ပစ္စည်း Smartphone HONOR 8S
5.71" Dewdrop ဘေးဘောင်းသေးမျက်နှာပြင် | 13 MP ကင်မရာ | Wide Aperture Lens
5.71" Dewdrop ဘေးဘောင်းသေးမျက်နှာပြင်1
13MP Wide Aperture အနောက်ကင်မရာ
3,020mAh အားကြာရှည်ခံ ဘက်ထရီ
5.71" ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပြည် အတွေ့အကြုံ2
ဖုန်းမျက်နှာပြင် 5.71" flagship အဆင့်ရှိ dewdrop notch မျက်နှာပြင်သည် သေးငယ်သောဘေးဘောင်မျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြု၍ ဖုန်း၏အနားသုံးဖက်ကို ပိုမိုသေသပ်လှပစေသည်။ဖုန်းမျက်နှာပြင်နှင့် ကိုယ်ထည်ကို အချိုး ၈၄.၆ ကိုရရှိစေသည်။TÜV Rheinland eye comfort ထောက်ခံချက်မှုဖြင့် အလင်းပြာထွက်ပေါ်မှုကိုလျော့ကျပြီး မျက်စိကြာရှည်စွာ ထိခိုက်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။Finger gesture လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် သင့်ကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် သွက်လက်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြီးမြောက်စေသည်။
5.71" ကြီးမာသော မျက်နှာပြင်
ကျဉ်းမြောင်းသော အနားသုံးဖက်ငယ် ဒီဇိုင်း
TÜV Rheinland ထောက်ခံချက်
လွယ်ကူးရိုးရှင်သော ရေစက် ဒီဇိုင်း
ဖုန်းမျက်နှာပြင် ထိပ်ပိုင်းတွင်း 3.5mm3 အနားသာရှိ။အရှေ့ ကင်မရာ, အလင်း အာရုံခံ ကိရိယာ, ထိစပ်မှု အာရုံခံကိရိယာ, အသံထုတ်လွင် ကိရိယာများအားလုံးကို တစ်နေရာတည် စုစည်းပေးထားသည်။ပုံမှန် အသုံးပြုနေသော notch ထက် dewdrop notchဒီဇိုင်းက နေရာ ၇၁.၁%³ ချွေတာပေးသည်။အမှောင်အောက်၌လည်း မျက်နှာလော့ဖွင့် စနစ်ကိုထောက်ပံပေးသည်။ မျက်နှာ အနေအထား၁၀၂၄မျိုးကို တိကျစွာခွဲခြားပေးနိုင်သည်။
လက်ရာမြောက် Dual-Texture ကိုယ်ထည်
ဂန္တဝင်ဆန်သော dual-texture စမတ်ဖုန်း ကိုယ်ထည် ဒီဇိုင်းနှင့် ပြောင်ချောသော မျက်နှာပြင်။HONOR 8S သည် စက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။သာပေမဲ့ သူဟာလည်း အနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။သူဆီမှာ လူကြိုက်များသော ကာလာအရောင်သုံးမျိုးဖြင့်သင့်နှစ်သက်သော အရောင်များကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။အမဲရောင် ရွှေရောင် အပြာရောင်။
* 3020mAh ပုံမှန်ပါဝင်မှု ပမာဏ
Dual SIM Slot and Micro-SD Slot, စွမ်းဆောင်ရေးမြင့်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ
Dual SIM slot နှင့် Micro-SD slotဒီဇိုင်းသည် Dual VoLTE HD calls6ကိုထောက်ပံပေးသည်။ SIM ကတ်နှစ်ကတ်နှင့် microSD သည် ပြိုင်တူအလုပ်လုပ်ပေးသည်။512GB မှတ်ဥာဏ်သိုလှောင်မှု ထောက်ပံပေးသည်။သီချင်းအပုဒ်ရေ ၁၀၀၀၀ကျော်ကို အရည်အသွေးမနိမ့်ကျစေပဲ သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။
13MP Wide Aperture Camera: ကြည်လင်ပြတ်သာသော ညဓာတ်ပုံ7
အနောက်ဖက် 13MP ကင်မရာနှင့် f/1.8 aperture အလင်းပိုမိုစုစည်းပေးခြင်းဖြင့် ညအချိန် ဓာတ်ပုံနှင့် နောက်ခံ အလင်းမှုံဝါ ရလဒ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အရှေ့ 5MP ကင်မရာသည် အလိုအလျောက် သင့်၏ selficဓာတ်ပုံကို ပြုပြင်ပေးသည်။သာကြောင့် သင့်အမှတ်မထင် ရိုက်မိတိုင်း သင့်၏ ဓာတ်ပုံမလှမပ ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်းစရာမလိုတော့ဘူး။
MT6761 high-frequency quad-core လုပ်ဆောင်ချက် အမြင့်ဆုံး 2.0GHz စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်4။၎င်းသည် 12nm flagshipအဆင့်သည် လျှပ်စစ်ချွေတာနိုင်ထိ ထောက်ပံပေးသည်။
EMUI 9.05: စနစ်သစ်အတွက် ဖုန်းအသစ်
အဆိုပါ EMUI 9.0စနစ်လုပ်ဆောက်ချက်သည် Andriod 9.0ကို အခြေခံပြီး အဆင်မြင့်တင်ထားသည်။နောက်ခံ appများကိုAI နည်းပညာတွက်ချက်နည်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲ ထိန်းသိမ်းမွမ်းမံထားသည်။ထိုကြောင့်ဖုန်းအချိန်ကြာမြင့်စွာ သုံးစွဲရာတွင်လည်း ဖုန်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို ထစ်ငေါ့ခြင်း ကင်းဝေးပြီး အဆင်ပြေချော့မွေစွာ အသုံးပြုနိုင်။
စိတ်ချသော ယုံကြည်မှု, သာလွန်သော အရည်အသွေး
စည်းကမ်းတင်းကျပ်သော အရည်အသွေးစစ်ဆေး လုပ်ဆောင်မှုအောက်၌ HONOR 8S၏ စက်အတွင်းပိုင်း ပစ္စည်းကြံခိုင်မှုကို နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်း 4.1ကို အခြေခံ၍ စစ်ဆေးထားသည်။ထိုကြောင့် အရည်အသွေးကို အမြင့်ဆုံး စံချိန်စံညွှန်ကို စောင့်ထိန်းထားသည်။
1. ဘေးဘောင်သေး မျက်နှာပြင်သည် အခုဈေးကွက်အတွင်း၌ လက်ခံထားသော အမြင်ဖြစ်သည်။ယေဘုယျ ဖုန်းတစ်လုံနှင့် သေးငယ်သော ဘေးဘောင်။မြင့်မာသော screen-to-body နှင့် သေးငယ်သော အထစ်ကို ရည်ညွှန်း ဆိုလိုပါသည်။
2. HONOR 8Sသည် ထောင့်ကွေးဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုထားပါသည်။ဖန်သားရဲ့ထောင့်ပိုင်းအရှည်သည်5.71 လက်မရှိသည်။ measures 5.71 inches.
3. ဒေတာ အချက်အလက်များနှင့် စံနှုန်း ရလဒ်သည် HONOR စမ်းသပ်ခန်းမှ ထွက်ပေါ်သောရလဒ်ဖြစ်သည်။
4. HONOR 7Sနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထား
5. 9.0 lite စနစ်ကို အသုံးပြုထားပါသည်။ထိုကြောင် တစ်ချို့လုပ်ဆောင်ချက်များမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ဖုန်းတွင်ပါဝင်သော စနစ်တာ အမှန်ဖြစ်သည်။
6. 4G နှစ်ကဒ်ထောက်ပံခြင်းသည် ကွန်ရက် ဒေတာ ထောက်ပံနိုင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ software အသစ်မြင့်တင်ပြီး ကွန်ရက် ဒေတာများများ ထောက်ပံအသုံးနိုင်ခြင်းသည် app၏ 4G ထောက်ပံမှုပေါ် မူတည်သည်။
7. ဘက်ထရီစွမ်းရည်သည် ပုံမှန် ဗို့အားနှင့် တိုင်းတာထားပါသည်။
8. ဖုန်းနှင့် ရိုက်ကူးရာတွင် အရည်အသွေးသည် ပတ်ဝန်ကျင်ပေါ်မူတည်ပြီး ခြားနားနိုင်သည်။
9. ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲသည် ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် နှောက်နှေး မပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။အကယ်၍ ပစ္စည်းဈေးနှုန်းနှင့် အရောင်းမြင့်တင့်မှုများ ထူးခြားပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ပါက ကျေးဇူးပြု ၍ကျွန်မတို့ကို အမြန်ဆက်သွယ်မေးမြန်ပြောပေးပါ။
10. အထက်ပါ ဓာတ်ပုံနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်သည် ကိုးကာရည်ညွှန်းရန်သာ ဖြစ်သည်။အမှန်တစ်ကယ် ထုတ်ကုန်အချက်အလက်နှင့် လက္ခဏာ(အပြင်ပုံပန်း သဏ္ဌာန်, အရောင်,အရွယ်အစား မပါဝင်ပါ)အမှန်တကယ်ပါဝင်သော အချက်အလက် (နောက်ခံဓာတ်ပုံ,UI,သင်္ကေတ မပါဝင်)ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
11. HONORသည် ထုတ်ကုန်တွဲများ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများနှင့် ပံ့ပိုးမှု့ဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်များ အပါအဝင် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီပြောင်းလဲမှုများကြောင့် တိကျမှန်ကန်သော ထုတ်ကုန်အချက်အလက် အသေးစိတ်အချက်များနှင့် အင်္ဂါရပ်များကို ပံပိုးရန်အတွက် Huawei/HONORသည် အထက်ပါ အချက်အလက်စာမျက်နှာများရှိ စာသားဖော်ပြချက်များနှင့် ပုံများအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ပါမည်။ သို့မှသာ ၎င်းတို့သည် ထုတ်ကုန်အစစ်အမှန်၏ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွှက်ချက်။အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ။ အညွှန်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ကိုက်ညီနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသည် ကြိုတင် အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ထုတ်ကုန် အချက်အလက်များသည် ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပြင်ဆင်ချက်များအတိုင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
· အားလုံးသော ဒေတာအချက်အလက်များသည် HONOR စမ်းသပ်ခန်း သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန် နိယာမသဘော ရလဒ်ဖြစ်သည်။(စမ်းသပ်ချက်အကြောင်းအရားများကို အထက်ပါ စာမျက်နှာများကို ဖတ်ရှုလိုက်ပါ)ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အချက်အလက်များ၊ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်း၊app လုပ်ဆောင်ချက် အခြေနေ နှင့် နေရာဒေတာပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသည် အမှန်နှင့်နည်းနည်းကွဲပြားနိုင်သည်။အသုံးပြုမှု ရရှိသော အချက်အလက်များကို အမှန်ယူပါ။